Momba anay - JIANGSU IMI ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO., LTD
Bisikileta tanàna elektrika
MITONDRANA KARGO elektrika
Bisikileta elektrika FAT TIRE
Jsimi ---- Famokarana sy fanamboarana bisikileta elektrika
Niorina tamin'ny 2013, Jiangsu IMI dia manana traikefa mihoatra ny 8 taona amin'ny famokarana sy fizarana bisikileta elektrika. Amin'ny maha orinasa azy, miezaka ny hanana kalitao sy tsy tapaka hikaroka fivoarana, IMI dia manambola hatrany amin'ireo fotodrafitrasa mifandraika amin'ny famokarana.
Tamin'ny volana martsa 2018, ny orinasa dia nanambola tsipika fivoriambe vaovao hikarakarana ny fitomboan'ny fahafaha-mamokatra.
Tamin'ny volana mey 2018, nanokatra ny orinasan-tsary hosodoko ny orinasa, nandray andalana fandokoana roa mandeha ho azy, Ny orinasan-tsary hosodoko dia natao hanompoana sary hosodoko bisikileta mahazatra sy avo lenta sy sary e-bisikileta, mahazo laza tsara eo amin'ireo mpanjifanay izy io.
Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 60 ny mpiasa ao amin'ny IMI. Mba hampivelarana sy hampitomboana hatrany ny fahaizan'ny mpiasa sy ny injenierany dia nanao kilasy fanofanana feno ny orinasa.
Miaraka amin'ny fampiasam-bolan'ny tsipika famokarana faharoa dia nitombo hatramin'ny 50 000 E-bisikileta isan-taona ny fahaizan'ny IMI.
Ny famokarana ny orinasa dia ahitana fomba e-bisikileta samihafa. Mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra dia manana fifehezana isaky ny dingana famokarana izahay - manomboka amin'ny fananganana kodiarana, amin'ny alàlan'ny sary hosodoko, hatramin'ny fivoriana farany amin'ny bisikileta elektrika amin'ny tsipika mivory.
Ny sampan-draharahan'ny R&D ao an-trano, ny endrika famolavolana ary ny fividianana trano dia manome fahalalahana lehibe ho an'ny mpanjifanay.
Amin'izao fotoana izao, ny IMI dia mamokatra bisikileta e-20 000 mahery isan-taona, izay bisikileta eran-tany maherin'ny 10.000 no bisikileta misy herinaratra, izay laharam-pahamehan'ny orinasa amin'ireo mpanondrana bisikileta lehibe indrindra ao amin'ny faritra. Mba hanomezana toky ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa faran'izay betsaka, ny e-bisikileta rehetra dia novokarina mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra Eoropeana sy Etazonia.
Fahitana sy sanda
Ny vinanay dia ny hamokarana tsy tapaka sy hanomezana vokatra avo lenta avo lenta mifanaraka amin'ny fenitra kalitao ary ho mpiara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay.
Ny soatoavinay dia: Fanavaozana, fikasana, fahatokisana, matihanina
Miarahaba antsika mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mitsidika anay amin'ny serivisy OEM sy ODM.
JIANGSU IMI ELAKELY TECHNOLOGY CO., LTD
E-bisikileta toy izany